स्नातक उत्तीर्ण गरेर अमेरिका जान चाहनेका लागी सुनौलो अवसर, आवेदन भर्न छुटाउनुभएको त छैन? – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/स्नातक उत्तीर्ण गरेर अमेरिका जान चाहनेका लागी सुनौलो अवसर, आवेदन भर्न छुटाउनुभएको त छैन?
स्नातक उत्तीर्ण गरेर अमेरिका जान चाहनेका लागी सुनौलो अवसर, आवेदन भर्न छुटाउनुभएको त छैन?
काठमााडौं । के तपाई स्नातक (ब्याचलर) उत्तीर्ण हुनुहुन्छ? अंग्रेजीमा राम्रो दख्खल राख्नुहुन्छ? त्यसोभए यो एउटा सुनौलो अवसर पनि हो । अमेरिकाले रोजगारीको लागि उच्च शिक्षा प्राप्त क्षमतावान नेपालीहरुका लागि कामदार (वर्किङ) भिसा पठाइसकेको छ । मार्च १ तारिखदेखि आवेदन खुला भइसकेको छ । अमेरिकी सरकारले कामदार भिसा मार्फत् अमेरिका जान चाहने इच्छुकले आवदेन दिन सक्ने जनाएको छ । आवेदन अमेरिकी नागरिकता तथा बसाईसराई सेवा (युएस सिटिजनपि एण्ड इमिग्रेसन सर्भिस) को वेवसाइटमा गएर आवेदन फाराम भर्न सकिनेछ । जुनसुकै विषयमा स्नातक गरेकाले आवेदन फाराम भर्न सक्नेछन् ।
‘एचवान बी’ले मार्च १ तारिकदेखि आवेदन खुल्ला गरेको हो । अमेरिकी रोजगारदाताले उच्च शिक्षा भएका व्यक्तिका लागि प्राथमिकता दिदै पहिलोपटक अनलाइनमार्फत आवेदन माग गरेको छ । युएससी आईएसको सूचना अनुसार मार्च १ तारिख दिउँसो १२ बजेदेखि आवेदन दिन सकिने उल्लेख छ । सूचनामा यस पटक ब्याचलर डिग्री गरेकाहरुका लागि विश्व भरबाट बढीमा ६५ हजारको कोटा खुला गरिएको छ भने अमेरिकामै मास्टर्स डिग्री गरेकाहरूका लागि २० हजारको कोटा खुला गरेको जनाइएको छ । रोजगारीको लागि अमेरिका जान चाहने व्यक्तिले विश्वको जुनसुकै स्थानबाट आवेदन भर्न सक्ने छन् । सवै प्रकृया पूरा गरि पास भए एचवान बी भिसा पाईने छ ।
वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविलास पण्डित अमेरिकाले रोजगारीको लागि नेपाली कामदार माग गर्नु राम्रो कुरा भएपनि यसको दूरगामी असर पनि देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘अमेरिकाले उच्च शिक्षा र सीप भएका कामदारको माग गरेकोले सीप भएका दक्ष मानिस नेपालमा कम भएको देखिन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले उच्च शिक्षा संगै सम्वधित विषयमा दक्ष बनाउन आवश्यक छ ।’ त्यसो त अमेरिका नै गएको खण्डमा पनि व्यवहारिक ज्ञान दिन सके विदेशमा पनि राम्रो कमाई गरेर स्वदेश फर्किएपछि देश विकासमा टेवा पुर्याउन सकिने उनको सल्लाह रहेको छ ।
के त्यसो भए विद्यार्थीहरु अमेरिका जानु गलत हो? उनी त्यसलाई त्यसरी नबुझ्न आग्रह गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अमेरिकीकाको मुख्य योजना नै विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका दक्ष र पढेलेखेका मान्छे आफनो देशमा भित्र्याउनु हो । यद्यपि, पढे÷लेखेका नेपालीहरु रोजगारीको लागि खाडी मुलुक जानु भन्दा अमेरिका जानु नै राम्रो हो । तर, सरकारले त्यहाँ गएका विद्यार्थीहरुलाई स्वदेश फर्काउने काममा सफल भएको देखिदैन ।’ उनी अमेरिका गएर उताकै नागरिकता लिएर भासिने समस्या जटिल बन्दै गएको देख्छन् ।फाराम यहाँ गएर भर्नुहोस्ः
#सुत्नु__भन्दा__अघि यो सेती नाग लाई भाग्यमानी ले मात्र देख्न पाउनु हुनेछ। यो फोटो देख्ना साथ ॐ लेखी Like र share गर्नुहोला । तपाईंले चाहेको आटेको काम पूरा हुनेछ ।
बैतडीमा कार्यरत एक नेपाली सेनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
नेपालको ताजमहल भनेर चिनिने पाल्पाको ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय रानीमहल दरबार रङरोगनपछि देखियो सुन्दर